A new Period Of Ukuhamba-Electric skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
A new Period Of Ukuhamba-Electric skateboard
Ngokuvamile, ngenxa ubukhulu nesisindo skateboard ethwele kubo kuyindaba. Ikakhulukazi yethu abasebenzi eJalimane ezisekelwe Kwase kuyisikhathi eside ngilithanda nelukuluku lokwazi "electro-ukuhamba", okuyinto kuyinto ekhathazayo kakhulu kwezepolitiki eJalimane futhi ngempela kuwo wonke amazwe wonke eYurophu. Sinikeza prime-notch umthengi usizo njengoba ngempumelelo ukuze uhlale unolwazi futhi ukusebenza noma cha wena imodeli umthengi entsha noma eyodwa ngokuhamba kwesikhathi! Zonke isikhathi isigqoko sokuzivikela, kanye nezinye nokuvikeleka eyamukelekayo igiya (isib Ethembele isiqondiso lendawo yakho, ungase kumelwe kugqoke isigqoko lapho ugibele. Udinga usizo ukwakha i- skateboard kagesi? KOOWHEEL Drive mountable drive kagesi ejika yimuphi skateboard njalo ibe skateboard kagesi – inside minutes. In terms of range, it goes with out saying that the bigger the range, the higher because you can be allowed to cowl spectacular distances without needing to recharge it every 10 minutes. Don’t matter in case you are looking for a brand new financial manner of transport or just need enjoyable, the Koowheel cruiser will provide you the highest quality of skating.
Koowheel imiphumela emihle Cruiser waphuza lapha njengendlela ukumangala, becabanga kuwufanele, okuyinto ukwehla kunamanye skateboard eziningi kagesi. I Koowheel siqhutshwa sisebenzisa isilawuli ophathwa ngesandla esikude okuyinto ngaphezu kwalokho uqhosha motor kokuxazulula lokho brushless. Ngenxa esikhundleni, inikeza ohulumeni bomdabu igunya ukunquma yini noma cha ukuvumela nobungoti umuntu emizini yabo ethile. Koowheel ukwakha izinga prime futhi ngokweqile ukusebenza skateboard kagesi for idolobha zokuthutha nemisebenzi bezemidlalo. Koowheel sinikeza i skateboard kagesinge kuwufanele zicatshangwe kanye isiqinisekiso yokuncintisana at izindleko okungabizi. Ngingumfana abanothando ukubaluleka kokuthatha izingozi - ezweni ngokuvamile ukhetha esingafuni. Lokhu kwenza ukuba ukwazi ukuqapha degree ibhethri, ukuze ungazitholi ngokwakho nge skateboard engenamsebenzi ngokuxhamazela. Kuvele izingxenye ebalulekile kagesi imishini skateboard kukhona amabhethri for powering le skateboard motored, isilawuli for ukusheshisa nokuhlale unyathela amabhuleki, main ibhodi obandayo futhi ishaja sokuzivuselela ibhethri.
I ezimbili ezibalulekile motor izinhlobo ukuze sicabangisise lapha kungaba-wheel ihabhu motors noma ibhande kwaphoqa abathandekayo. Electric yethu Skateboard Kits kuzosiza ukuthi loluhlelo lube lula. Ngokuvamile, kukhona nama-skateboard kagesi ku-mgwaqo skateboard kagesi. Nakuba kuye kwaba esinye phakathi engikubhalile ezishisayo futhi wabukela kakhulu, eziningi abantu ungitshele ngempendulo ukuthi bezilokhu zikhona ezinye amabhodi empeleni enhle entulekayo. Noma kunjalo, ngemva ukuthuthukiswa siwumpompe inikwa amandla yi skateboard, kuye kwaba izimbangela ezinhle ezimbalwa okudale lezi amabhodi esinenjini ukuze athole wavalwa efana: umsindo ezivezwa izinjini nophethiloli izinjini ukuthi badala ukungcola.
Ukuphishekela ukuthola kakhulu engcono skateboard kagesi uyaqhubeka, uzimisele ukuthola? KOOWHEEL skateboard mix ka ngokweqile zemidlalo ukujula nge injabulo zakudala skateborda athumele omunye the best amandla boarding nakho kuyatholakala! Njengamanje ngithwala, umbono wami, i-10 nama-skateboard enkulu ukusetshenziswa nsuku zonke. Top-of-the-line sibuyekezwe ekhiqiza 2018 kuyinto Koowheel. It unikeza isivinini 30KM / h evamile, phezulu isivinini no-45KM / h, uhambe ngokushesha, futhi ungakwazi ukumboza azungeze 20 kuya 25 km nomunye kwebhethri. Ibhethri samanje 20pcs18650 izinga High lithium amaseli.
isikhathi Iposi: Feb-06-2018